I-Pine Lodge ilala ngezinyawo ezingu-12 ukuya ebhishi i-Wisemans Bridge - I-Airbnb
I-Pine Lodge ilala ngezinyawo ezingu-12 ukuya ebhishi i-Wisemans Bridge
Stepaside, Wales, i-United Kingdom
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Sophie
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Sophie izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Pine Lodge, indlu yamaholide evalelwe e-Pleasant Valley, ukuhamba imizuzu eyi-10 ukusuka ebhishi laseWiseman's Bridge nogu. Ilala 12 emakamelweni okulala angu-5, ne-table tennis. I-Wifi iyatholakala, ifoni yokukhokha yendlu, umbhede kanye nesihlalo esiphezulu, i-microwave, umshini wokugeza izitsha, umshini wokuwasha, isiqandisi sefriji, indawo yokupaka amagumbi okugezela angu-3 (ibhavu elingu-1, izihlambi ezi-3). Ilungele imindeni emikhulu, abangani noma abantu abafuna ukuhlangana ndawonye. Amamayela angu-4 kuphela ukusuka ebhishi laseSaundersfoot, itheku kanye nedolobhana. Hamba uye endaweni yokucima ukoma ube nephayinti elibheke olwandle.
*Ukuze uthole amanani angcono kakhulu bheka i-Pine Lodge endaweni yamakotishi asogwini*
I-Pine Lodge iyindlu ehlukanisiwe, enezinga elihlukanisiwe. Kukhona umqansa wokupaka (cishe izimoto ezi-3). Ukusuka ku-driveway indlela emfushane iholela ezitebhisini ezikhuphukela emnyango wangaphambili wendlu. (cishe izinyathelo eziyi-11 noma eziyi-12). Ungena ephasishi (isitezi esitezi), amahhuku ejazi ngemuva komnyango. Jikela kwesokunxele ungene egumbini lokuhlala/igumbi lokuphumula, elineminyango emikhulu eshelelayo evulekela kuvulandi ojulile obheke esigodini (iPleasant Valley). Igumbi lokuhlala line-TV, i-Sky (iphakheji eyisisekelo), isidlali seDVD. Kunesitofu esishisayo sezinkuni ezikhilimu okujabulisayo lapho umlilo uqhubeka ngosuku olubandayo. Kunezincwadi nemidlalo ezosetshenziswa izivakashi. Leli gumbi lineminyango eshelelayo endaweni yokudlela yesibili, enetafula eliqinile lesitayela sasekhishini lendlu yasepulazini kanye nezihlalo eziyisi-6 (ezinhle kakhulu ngesidlo sasekuseni sezingane nesakusihlwa). Leli khishi livulekele ingxenye yekhishi elinekhishi elifakelwe ukhilimu wakudala, ihobhi, i-ovini ephindwe kabili, amakhabethe okugcina, Izitsha, izingilazi, izitsha zokupheka, izitsha, izinto zokugezela njll. Kukhona i-microwave, i-toaster, iketela, umshini wokugeza izitsha nesiqandisi/ifriji. Kuvuleka umnyango usuka ekhishini uye ngemuva kwendlu bese omunye umnyango ukubuyisela ephasishi. Ukusuka egunjini lokudlela lesibili udlula kwenye indawo yokuvula usiya endlini yokudlela egcina indawo yokuhlala. Lena inetafula lokudlela lomndeni labangu-12. Ucingo lokukhokha lukhona lapha futhi kunendawo enkulu esikiwe enebha yokuphakela yasekhishini. Kukhona neminyango yesiFulentshi ngaphandle (ngalezo zinsuku ezishisayo). Kusuka emnyango wehholo lokungena ukujikela kwesokudla kanye nezinyathelo ezi-3 zikuyisa emakamelweni okulala aphezulu. Kukhona ikamelo lokulala eliphindwe kabili, ikamelo lokulala eliphindwe kabili kanye negumbi eliphindwe kathathu elinombhede owodwa kanye nesethi yemibhede engaphansi. Kukhona negumbi lokugezela lomndeni lapha, igumbi elikhulu elinebhavu elishisiwe, i-shower cubicle, indishi yokuwasha kanye ne-wc. Phansi, kunelinye igumbi lokulala eliphindwe kabili elinegumbi lokugezela eline-ensuite elinesitsha sokuwasha kanye ne-wc nelinye igumbi lomndeni elinombhede ophindwe kabili nombhede owodwa - leli linegumbi lokugezela le-ensuite elinesitsha sokugezela kanye ne-wc. Phansi kwezitebhisi ukujikela kwesokunxele kukuyisa egumbini lezinsiza elinomshini wokuwasha, ukomisa okomile kanye nosinki. Ngaleli gumbi kuholela egaraji eselishintshiwe laba inkundla yemidlalo/yokudlala - kukhona osofa abadala, itafula lethenisi, itafula nezihlalo zokufaka imibala/ukudweba neminye imidlalo. Kunezicabha ezishelelayo ukusuka lapha kuya ku-driveway ngaphandle. Izakhiwo zitshekile futhi zinezindawo ezimbalwa ezihlukene ezinotshani, ukunakekelwa kuyadingeka ezinganeni/labo abangazethembi kangako ezinyaweni zabo njengoba kunemithambeka namaconsi futhi ingaphandle alivalwanga nganoma iyiphi indlela, ngakho izilwane ezifuywayo kufanele zigadwe.
Ukusuka endlini ungawela umgwaqo (ujikela kwesokunxele) bese uthatha indlela yezinyawo ewela umgwaqo kwesokudla (cishe amayds ayi-10 ukusuka endlini) ulandele le ndlela enqamula ihlathi nepaki yekharavani ukuze ufike e-Wiseman's Bridge Beach (weqa umgwaqo. lapha) kunendawo yokucima ukoma enkulu ogwini lapha ebizwa nge-Wiseman's Bridge Inn, edume ngokudla kwase-pub kanye nesidlo sasemini sangeSonto. Lolu lwandle lunomzila wetiyela oqala ekugcineni osentshonalanga futhi ungalandelwa yonke indlela eya ebhishi laseCoppet Hall kanye ne-Coast Restaurant bese udlulela ebhishi laseSaundersfoot, itheku kanye nedolobhana elinezitolo zayo, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela.
4.80 · 11 okushiwo abanye
IPembrokeshire iyindawo emnandi ongachitha kuyo isikhathi, kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isimo sezulu, intwasahlobo, ihlobo, ikwindla nobusika. Ngamakhilomitha angaphezu kuka-186 e-National Park Coastal Path, amabhishi amahle, indawo yasemaphandleni ebukekayo, izilwane zasendle ezimangalisayo kanye nezinto eziningi ezikhangayo ezivela e-Castles ukuya kuma-karts, ukuvuka ukugibela ukuqasha ngamabhayisikili nokunye okuningi. I-Pleasant Valley iyindlela yezwe yokuhlala enezakhiwo ezivalekile. Ukuba seduze kosebe lolwandle e-Wiseman's Bridge kusho ukuthi uhambo oluya olwandle luyingxenye yansuku zonke yokuhlala kwakho. Ukushayela okusheshayo uma ungakuthandi ukuhamba (noma ukuthwala ipikiniki) futhi kukhona amanye amabhishi amaningi ongawathola ngasogwini kuzo zombili izinkomba. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe ngicela ungibuzele nje, ngingakujabulela ukusiza.
We are from Wales originally and live in Pembrokeshire (however, not in Tenby). We have a young family who have grown up here and we love the coast and it's magic, whatever the se…
AmaCottages asogwini abheka indlu futhi ngingathintwa nami. Ngihlala eduze futhi ngaphandle kokuthi uma ngingekho ngingakusiza ukukukhomba endleleni efanele.
Hlola ezinye izinketho ezise- Stepaside namaphethelo